နားခိုရာ: Low Level Programming
၁၉၈၉ခုနှစ်ဦးပိုင်းလောက်မှာ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ မြို့ထဲ ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းဆုံနားက MCC မှာ Basic Computer Course စတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သင်တန်းမတက်ရခင် တစ်ပါတ်လောက်အလို စိန့်အော်ဂက်စတင်း အထက်တန်းကျောင်း ဆုပေးပွဲနေ့မှာ သူငယ်ချင်းကိုနေထွန်းသိန်းက သူ့အိမ်မှာ ကွန်ပျူတာရှိတဲ့အကြောင်း စလေ့လာနေကြောင်းပြောပြီး ကျွန်တော့်ကိုလဲ အားရင် သူ့အိမ်လာခဲ့ဖို့ ခေါ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းသူက program လုပ်ရတာသဘောကြကြောင်း ပြောပါတယ်။ (သူကအဲဒီအချိန်မှာ လေကြောင်းဦးစီးဌာနအတွက် Payrollကို Lotus 123 macro တွေနဲ့ ရေးပေးထားပြီး အဲဒါကို Dbase III Plus နဲ့ program အဖြစ်စရေးနေပြီ။ စာအုပ်ဖတ်ပြီးတွယ်နေတာ။ ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာဆိုတာကိုတောင် မမြင်ဖူးသေးဘူးရယ်)
ကျွန်တော့်အတွက် ကွန်ပျူတာဆိုတာကို စပြီးကြားဖူးတာအဖေ့ဆီကပါ။ ရှစ်တန်းကျောင်းသား အရွယ်လောက်က အဖေက Time magazine ထဲကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြရင်း Computer Engineer ဆိုတဲ့အလုပ်တွေ ပိုပိုပြီး ခေတ်စားလာကြောင်း ဒါကြောင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြီးလာရင်ြုဖစ်နိုင်ရင် အဲဒီလမ်းကြောင်းလိုက်ကြည့်သင့်ကြောင်း ပြောဖူးပါတယ်။ အဖေကလည်း လေတပ်ကဗိုလ်မှူး ဆိုသော်လည်း လက်နက်ကရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကားကို တစ်နှစ်လောက် training သွားဖူးသူ ဆိုတော့ electronic ဘာသာရပ်ပိုင်းကို သိပ်တော့မစိမ်းလှဘူးပေါ့။ အဲဒီတုန်းကသိတာကတော့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဂဏန်းတွက်စက်အကြီးစား ပိုပြီးအများကြီးလုပ်နိုင်ဆိုတာလောက်ပါပဲ။
MCCကို သင်တန်းအပ်တော့ သူတို့သင်မဲ့ Course Outline ကိုသိလာတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Programming ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ နေထွန်းသိန်းပြောတာလဲ ကြားဖူးထားတော့ သင်တန်းမတက်ရခင် စာလေးဘာလေး ကြိုဖတ်ထားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်လောက်က ကျွန်တော်က British Library မှာ member ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီခေတ်က Library ကြေးက တစ်နှစ်မှ ခုနစ်ဆယ့်ငါးကျပ်လားပဲ။ အဲဒီကနေ ၀ထ္ထုစာအုပ်တွေငှားဖတ်တာလေ။ ဒါနဲ့ပဲ programming စာအုပ်ရှာဖို့ British Library ကို ချီတက် သွားတာပေါ့။
Library မှာ ရှာရင်းဖွေရင်း Low level Programming ဆိုပြီးစာအုပ်တစ်အုပ်သွားတွေ့တယ်။ Low Level ဆိုတော့ ခပ်နိမ့်နိမ့် beginner level တွေအတွက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာကောက်ချက်ချလို့ အဲဒီစာအုပ်ကို ငှားလာတာပေါ့။ စိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ စာအုပ်ကို စဖတ်တယ်။ ဘာမှကိုနားမလည်ဘူး။ ကြိတ်မှိတ်ပြီး စဉ်းစားရင်းဆက်ဖတ်တယ်။ အစပိုင်းလေးငါးရွက်ကိုတင် သုံးလေးခေါက်ပြန်ဖတ်တယ်။ ခေါင်းတွေမူးလာရော။ ဘယ်လိုလုပ်နားလည်ပါ့မလဲ။ ကွန်ပျူတာဆိုတာကို မြင်တောင်မမြင်ဖူးသေးတဲ့သူက Assembly တို့ Machine Language တို့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို သွားဖတ်မိနေတာကိုး .... :D
အယ်... ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်။ Low level တောင် ဒီလောက်ခက်နေရင် High level ဆိုရင်တော့ ငါတော့ ခက်ချေပြီ။ ဒီဘာသာရပ်ကို လိုက်စားဖို့ ဥာဏ်မမီဘူးထင်တယ်လို့တောင် တွေးမိလာတယ်။ ဒါလဲမဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါက ကျောင်းသားဘ၀မှာလဲ အများနဲ့ယှဉ်ရင် ထိပ်ပိုင်နားမှာပဲ။ သချာင်္လဲဝါသနာပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တယ်။ ဒီ programming ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကိုက အရမ်းခက် နေတာလားပေါ့ တောင်တွေး မြောက်တွေးနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆက်ဖတ်လို့ နားမလည်တော့တဲ့အဆုံး စာအုပ်ကို Library ပြန်အပ်လိုက်ရတယ်။ အခုချိန်အဲဒီ အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြန်တွေးမိတိုင်း ပြုံးမိတယ်။ ကိုနဗနပြောသလို အ တာ မဟုတ်ဘူး Lack of experience ပဲထားပါတော့။
Posted by little moon at 1:51 PM
bravo! if i may request, i would like to read more about your experiences. thanks.
အချိန်ကုန်စေတဲ့ facebook game တွေ
Zawgyi 2009 and Win 2003 server
Canon EOS 7D ထွက်ပြီ။